News Collection: सेक्स फ्याक्ट : पुरुष किन स्तनमा आकषिर्त
युवाहरू किन युवतीको छातीतर्फ आकषिर्त हुन्छन् ? यस्ता प्रश्न सबै युवतीको मनमा रहन्छ। यसको उत्तर पुरुषसँग पनि छैन। आखिर किन पुरुषहरू युवतीको छातीप्रति आकषिर्त हुन्छन् ? यस विषयमा गरिएको एक अनुसन्धान पछि भने थुप्रै तथ्य सार्वजनिक भएका छन्। साधारणतया जब पुरुषले युवतीसँग गफ गर्न थाल्छ उसको नजर युवतीको आँखामा पर्नुको सट्टा पहिले युवतीको छातीमा पुग्छ। त्यसपछि घाँटीमा नजर जान्छ। त्यसपछि मात्र आँखामा। यस्तो खालको शरीरको भाषालाई युवतीले तुरुन्त बुभ्fm्छिन् पनि तर यस्तो अवस्थामा रहने पुरुषको मानसिकता गलत भने हुँदैन। अध्ययनअनुसार यो पुरुषहरूको स्वभाविक आचरण हो ।
अध्ययनअनुसार यदि युवतीको स्तन धेरै सानो वा ठूलो भए पुरुषले त्यस्ता युवतीको छातीमा धेरैबेर नजर लगाउँदैनन्। सेकेन्डभन्दा पनि कम समयमा पुरुषको नजर स्तनबाट हट्छ। कुरा गरिरहेको अवस्थामा पुरुषको नजर त्यतिबेला युवतीको स्तनमा धेरै जान्छ जुन युवतीको स्तन सेक्सी र मध्यम आकारको हुन्छ। कपडाबाहिर हल्का स्तन देखिएको छ भने पुरुषको नजर धेरै समय टिक्छ। उनीहरूको मस्तिष्कले बाध्यताबस छाती हेर्न उक्सइरहने अध्ययनले बताउँछ। अध्ययनअनुसार यदि युवती टाढा उभिरहेकी छिन् वा पुरुषतर्फ हेरिरहेकी छैनन भने पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी पुरुषको नजर सबैभन्दा पहिले युवतीको छातीमै परिरहेको हुन्छ। यौन सम्पर्कका बेला पनि स्तनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यौनको चरम बिन्दुमा पुग्न पनि स्तनले धेरै मद्दत पुर्‍याउँछ। अध्ययनअनुसार ६९ प्रतिशत युवती आफ्नो स्तनलाई आकर्षक बनाउन लागि परेका हुन्छन्।